Waini inosvika pane yayo yakagadzikana vhezheni 3.0, iine kuvandudzwa kweDirect3D | Linux Vakapindwa muropa
Mushure menguva refuo Iyo itsva yakagadzika vhezheni yeWini yakazopedzisira yabuda pachena, ino nguva ichisvika kubazi rechitatu reizvi. Uye zviri pachena kuti vagadziri vayo vanofara kuzivisa iyi nhau.
Neiyi vhezheni nyowani isu tinowana akawanda anovandudza uye kunyanya nyowani nyowani kuWine. NaWine 3.0 isu tinopedzisira tawana rutsigiro rwakananga rweDirect3D 11 inova ndiyo Graphics API yemitambo yemavhidhiyo yakatanga kugadzirirwa Windows 7.
Mune iyi vhezheni yeWine 3.0 tinowana iyo vhezheni yekutevedzera Windows 7 nekumisikidza, kutsiva Windows XP, Kune rimwe divi, iyo Reg.exe registry yekumanikidza chishandiso inotsigira kuunza kunze kwenyika mafaira erejista, isu takawanawo kuvandudzwa kwevatyairi, pamwe nemumifananidzo yeApple.
Pakati peimwe shanduko, inonyanya kuzivikanwa ndeiyi:
Kuyerera nzira yokubudisa.
Yakawanda modhi 4 shaders uye mashanu shader mirairo.
Model 4 uye 5 shader kudhindisa modifera.
Shader modhi 4 uye 5 clip uye kudonha madaro.
Inonatsiridza rutsigiro rwekutanga OpenGL mamiriro mune Direct3D
Kubva ipapo uchienda kunze kana iwe uchifarira kuziva shanduko mune iyi vhezheni, ndinokusiira iyo link kwaunogona kuverenga zvakadzama iyo inopfuura 6000 iyo yakaiswa
1 Maitiro ekuisa waini 3.0 paUbuntu uye zvigadzirwa?
2 Maitiro ekuisa waini 3.0 pane Fedora uye zvigadzirwa?
3 Maitiro ekuisa waini mu3.0 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
4 Mashandisiro Ekushandisa Waini paLinux?
Munyaya yaFedora uye zvigadzirwa zvayo, isu tinofanirwa kuwedzera yakakodzera repository kune iyo vhezheni yatiri kushandisa.
Maitiro ekuisa waini mu3.0 pane Arch Linux uye zvigadzirwa?
Munyaya yaArchLinux, Parizvino iri chete mune yayo RC vhezheni, saka iwe unofanirwa kungomirira iyo yakagadzikana vhezheni kuti ivandudzwe, izvi zvinowanikwa muMultilib repositories. Saka zvakafanira kuti ivo vagoneswe mune yedu pacman.conf
Mashandisiro Ekushandisa Waini paLinux?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kumisikidza Waini zvinoenderana nezvatinoda pairi tinogona kuvimba nechishandiso chako, isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye kumhanya:
Nayo tinogona kugadzirisa izvo zvatinotenda kuti zvinodikanwa, kumagumo isu tinongochengetedza marongero.
Zvino, kuisa chirongwa muWine isu tine nzira mbiri, yekutanga ndeye nekudzvanya kaviri pachirongwa uye Waini ichagadzirisa iyo yekuisa, pano dIwe unofanirwa kufunga nezvekuti iwe unofanirwa kunge wakaita magadzirirwo anodikanwa yechirongwa uye pamusoro pezvose kukuzivisa iwe kana ichishanda mushe kana iine matambudziko, unogona kuita izvi nekutsvaga zviri pamutemo peji reWine.
Chinhu chega chaunofanirwa kuongorora imaraibhurari akakosha kuitira kuti chirongwa chaunoda kumhanyisa muwaini chiitwe pasina matambudziko.
Nzira yechipiri ndeyekubva kuchiteshi, kune izvi isu tinofanirwa kunge tave patinenge tiine chirongwa chedu chatiri kuzoisa.
Iwo mafaera nemaforodha ayo anogadzirwa neWine, tinoawana mukati medu faira remunhu muWine subfolder, dura iri rakavanzwa, unogona kuriona nekudzvanya ctrl + H.
Parizvino ini ndinofarira opengl uye kwete vhezheni yeDirecxt neWine, kunyangwe mune dzimwe nguva ini ndinofanira kushandisa iyo Windows mifananidzo api yemimwe mitambo yandinayo muchimiro chemuviri uye ndinoimhanyisa paWine, ndezve izvozvi chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Waini inosvika kune yayo yakagadzikana vhezheni 3.0, pamwe nekugadziridzwa kweDirect3D
Nehurombo ndakave nekunyepedzera kwekukwanisa kutamba Battlefield 1 asi mushure mekukwanisa kuiisa iko kuora moyo kukuru kwandaifanira kuzviisa mune iyo nvidia inogadziridza sei madhiraivha ayo anosvetuka.
Parizvino ndine Ryzen 1700 + gtx 970 sc + 16gb ram.
Izvi ndakaedza ne ubuntu 17.10 uye nvidia 384.111 driver. Chii chingave chiri kuitika pano?
Hameno, makatarisa danda. ?
Unogona kundibatsira zvishoma? Handina kupinza chero chinhu mu /home/xxxx/.wine/drive_c/windows/logs uye hapana chinhu saizvozvo handina kana zano rakawanda rekuti ndinga zive sei vhidhiyo vhezheni yandinayo yewaini.
E: Iyo winehq-devel package haina kugona kuwanikwa
Waita, bvisa yapfuura chirevo